पतिपत्नी बीच जति धेरै झगडा, उति धेरै माया ! धेरै झगडा गर्ने जोडीको सम्वन्ध दिगो हुन्छ : अध्ययन - हिमगाथान्यूज
Home विचित्र-संसार पतिपत्नी बीच जति धेरै झगडा, उति धेरै माया ! धेरै झगडा गर्ने...
उक्त सर्भेक्षणमा सहभागी ४४ प्रतिशत विवाहित जोडिहरुले सातामा एक-पटकभन्दा बढी झगडा गर्ने गरेका थिए । यस्तो झगडाले सम्वन्धले कुनै दिर्घकालिन असर परेको देखिएन । कहिलेकाँही झगडा गर्ने जोडीहरु स-साना भ्रमका बाबजुद पनि लामो समयसम्म सँगै बस्छन् ।
किनभने उनीहरुलाई आफ्नो माया चोखो र पवित्र छ भन्ने थाहा हुन्छ ।आफ्नो सम्बन्धलाई दिगो र रमाइलो बनाउने हो भने मनमा तुष पालेर बस्नु हुँदैन । मनको कुरा आफ्नो जोडीसँग पोखिहाल्नुपर्छ । यदि तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग खुल्ला दिमागले राम्रोसँग बोल्न सक्नुभयो भने सम्बन्धमा प्रगाढता आँउछ । कहिलेकाहीँ हुने स-साना झगडापछि तपाईंलाई आफ्नो गल्तीको महसुस हुन्छ र यसले तपाईं आफ्नो प्रेमलाई अर्को तहमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ ।
तपाईंले चुप बसेर आफ्नो जोडीको विश्वास जित्न सक्नुहुन्न । यसको लागि तपाईंले खुल्ला दिमागले कुरा गर्नुपर्छ । आफ्नो कार्यहरुको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ र एकअर्काको कुरा राम्रोसँग सुन्नुपर्छ । झगडा वा वादविवाद गर्नु पनि सञ्चारको प्रमुख र सबैभन्दा प्रभावकारी रुप हो ।
यसले आत्मियता, विश्वास र लगावको भावना बढाउन मद्धत गर्छ र पार्टनरलाई तपाईंसँग अझै राम्रो तरिकाले कुरा गर्न सिकाउँछ । मनोवैज्ञानिकहरुले स्वस्थ र सुखी सम्बन्धका ७ मुख्य तत्वहरुमा झगडालाई पनि एक मानेका छन् । यदि जोडीले कहिल्यै पनि झगडा गरेनन् भने त्यसले उनीहरु दुईजना बीचमा केही राम्रो नभएको संकेत गर्छ ।
जब तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग झगडा गर्नुहुन्छ, यसमा जीत-हार कुरा ठूलो होइन । सबैभन्दा मुख्य कुरा तपाईंहरुले एक अर्कालाई राम्रोसँग बुझ्न पाउनुहुन्छ । बेलाबखत हुने साना झगडाले दुवैलाई एकअर्काको प्रकृति र स्वभाव बुझ्न सहयोग गर्छ । यसले आफ्नो पार्ट नरसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने सिकाउँछ । झगडाले सबै चुनौतीहरुलाई सँगै मिलेर सामना गर्न सिकाउँछ ।
नकारात्मक भावनाहरुलाई हटाउन र दुवैजनाको भावना र आवश्यकताहरु समान छन् भन्ने बोध गराउन कहिलेकाहीँ विवादले पनि काम गर्छ । केही अध्ययनहरुका अनुसार सबैभन्दा ठूलो गल्ती पार्टनरहरुले एक-अर्कालाई बेवास्ता गर्नु हो । कहिलेकाहीँ हामीले कुनै कुरा गलत भएको महसुस गर्छौं, तर पार्टनर रिसाउने डरले केही पनि भन्दैनौं ।
तर, यसरी नै कुराकानीमा कमी हुनु नै ब्रेकअप हुने सबैभन्दा ठूलो कारण बन्न सक्छ । संवेदनशील कुरामा एक-अर्कासँग बहस गर्नाले सम्बन्धलाई राम्रो गर्छ । झगडाले नै तपाईंलाई आफ्नो समस्याहरुमा केन्द्रित हुन दिन्छ र समस्या हुन अगाडि नै त्यसलाई समा धान गर्न सघाउँछ ।
त्यसैले जुन जोडीहरु प्राय झगडा गर्छन् उनीहरु लामो समयसम्म सँगै रहन्छन् । केही जोडीहरुले गम्भिर बहस गर्न मनपराउँछन् किनभने त्यसले उनीहरुको हार्मोनको स्तर बढाउँछ ।त्यसैगरी ती मानिसहरुलाई थाहा हुन्छ कि झगडा उनीहरुको उत्साहको संकेत हो ।
यसले एक-अर्काको विचारलाई स्थान दिन र सम्मान गर्न सिकाउँछ । उनीहरुको फरकपनाले सम्बन्धलाई झनै रोमाञ्चक बनाउँछ । यदि तपाईंहरु धेरै वर्षदेखि सँगै रहनुभएको छ भने पक्कै पनि पार्टनरका केही कुराहरु मन नपर्न सक्छन् र त्यो गलत पनि होइन। र चनात्मक द्वन्द्वले तपाईंको सम्बन्धलाई झनै प्रगाढ बनाउँछ ।
Previous articleम सोच्थेँ बुवा लोभी भएर फाटेको जुत्ता लगाएको होलान् तर होइन रहेछ पैसा कमाउन गार्हो रहेछ
Next articleपानीले चल्ने कार
यी ६ कुरा महिलासँग भुलेर पनि नसोध्नुस्
ठूला स्तनकै कारण जुत्ता लगाउन सकस परेपछि…